Ogaden News Agency (ONA) – Sarkaal Sare oo ka Tirsan Booliska Calgery oo la Shiray Jaaliyadda Somalida iyo Mawqifka OYSU
Sarkaal Sare oo ka Tirsan Booliska Calgery oo la Shiray Jaaliyadda Somalida iyo Mawqifka OYSU
Rick Hanson ayaa ku bilaabay hadalkiisa; Waxaan rabaa caruurta Somalida Kanadiyaanka ah Inay helaan xuquuqda inay nabad ku koraan.
Sarkaalgan oo kula hadlayay jaaliyadda Somalida Xarunta Abu Bakar Islamic Centre ayaa u sheegay inay booliska magaalada kala shaqaynayaan jaaliyadda sidii loo joojin lahaa dagaalka ay ku dhimanayaan dhalintooda.
Halkan Ka Daawo : (RIIX)
Shirkan ayaa ka dambeeyay ka dib markii laba dhalinyara ah oo Somalida Calgery ku nool lagu dilay maalin gudaheed sanadkan 2015 ee bilowga ah. Cabdulaahi Axmad 27 jir ah iyo Murad Cumar 23 jir ah ayaa siyaaba kala duwan oon xidhiidh lahayn u dhintay.
Madaxda jaaliyadda Somaliyeed ayaa ka codsaday siyaasiyiinta gobolka iyo saraakiisha booliska inay iska arkaan dhibkan haysta dhalinyarada Somaliyeed oy ka maqlaan ra’yigooda. Codsigaa ayaa loogu soo diray Mr. Rick Hansen, isagoo ku qaabilay xaruntaa 150 ka mid ahaa odayaasha jaaliyadda.
Sarkaalkan ayaa dajiyay xubnaha uu la kulmay isagoo yidhi sababta aan idiinku imid waa in aan kawada tashano caruurtan quruxda badan ee dalkan idiinku dhalatay siday ugu kori lahaayeen nolol nabdoon.
Xubnaha jaaliyadda Somalida Ogadenya ee gobolkaa oo arintan aan wax ka weydiiyay ayaa waxay sheegeen in dhibaatada ugu badan ee haysata dhalinyarada Somaliyeed ay tahay hadaf la’aanta, taasoo keenaysa inuu qofka dhalinyarada ah marka dambe ku biiro kooxaha Gangs-ka oo dhexdooda ka dagaalama. Arintaa ayay jaaliyadda S.Ogadenya ka badbaaday ayuu yidhi xubinkan aan wareysanay ka dib markii la asaasay Ururka Dhlinayarada OYSU oo barnaamijyo taabagal ah u sameeyay dhalinyarada, kuna baraarujiyay inay saaran tahay masuuliyad oo dalkoodii iyo dadkoodiiba ay ku jiraan gumaysi, oo mid iyaga da’doodoo kale ah uu gumaysanayo.
Wuxuu ugu baaqay masuulkan jaaliyadda Canada aan ka wareysanay, waalidiinta Somalida Ogadenya meel ay joogaanba inay ku baraarujiyaan dhalinyaradooda dugsiyada dhigata inay ku xidhmaan xarumaha OYSU si aanay ubadkooda ola mid noqonin kuwa ay jaaliyadaha ugu yeedhaan – Iska Noole – oo loola jeedo qof aan garanaynin masuuliyad saaran oo iska nool un, taasoo ku dambaynaysa qofka dhalinyarada ah inuu meel un ku dhaqaajiyo aan u haboonayn mustaqbalka noloshiisa aduun iyo aakhiraba.